MSF OO TAAGEEREYSA DHAAWACA KA DIB MARKII UU DAGAAL CULUS KA DHACAY SOOMAALIYA - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF OO TAAGEEREYSA DHAAWACA KA DIB MARKII UU DAGAAL CULUS KA DHACAY SOOMAALIYA
13.09.2011 | Qeybta Guud
Ururka caalamiga ah ee caafimaadka ee bani’aadamnimada Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa gargaaraya bukaannada dhaawaca ah ka dib markii uu dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ee Soomaaliya. Dagaal culus ayaa Khamiistii [1/9/11] ka qarxay magaalada, kaas oo sababey dhaawacyo ay ka mid ahaayeen dad rayid ah. Cusbitaalka Waqooyiga Gaalkacyo, oo qayb ahaan ay taageerto MSF, ayaa daweeyey 60 qof, oo badidoodu ahaayeen rayid, halka 20 qof oo dhaawac ah ilaa hadda lagu daweeyey cusbitaalka ay MSF maamusho ee ku yaalla qaybta koonfureed ee magaalada. Ilaa hadda, waxaa lagu soo warramey in dagaalka ay ku dhinteen 18 qof.
“MSF aad bey uga walaacsan tahay tirada badan ee dhaawaca iyo dhimashada dadka rayidka ah ee uu dagaalka hadda dhacay sababey,” ayaa uu yiri Rolland Kaya, oo ah Isuduwaha Mashruuca MSF. “Si dhow ayaan ula socon doonnaa xaaladda waxaana aan bixin
doonnaa gargaar caafimaad oo kale haddii loo baahdo.”
MSF ayaa cusbitaalka ku yaalla Waqooyiga Gaalkacyo gaarsiisey qalab qalliin iyo sahayda kale ee caafimaad ee loo baahan yahay si
wax loogu qabto dadka dhaawaca ah ee ku soo qulqulaya cusbitaalka. MSF waxaa ay ka shaqeyneysaa waaxda bukaan-jiifka ee cusbitaalka, iyada oo xoogga saareysa in ay daryeel caafimaad siiso carruurta ka hooseysa 12 sano jirka. Bishii Luuliyo ayaa MSF ay furtey waax cusub oo bukaan-jiifka carruurta ah, iyada oo uu ururku sidoo kale quudin-ku-daweyn u sameeyo carruurta nafaqo-xumadu hayso.
Koonfurta Gaalkacyo, ayaa MSF ay ku bixisaa adeegyo daryeel caafimaad oo ballaaran, oo ay ka mid yihiin adeegyada qalliinka.
Gaalkacyo waxaa waqtigan oo ay jirto xaalad nafaqo oo degdeg ah u wehelisa baahi caafimaad oo ba’an oo aan haysan oo keliya dadka degaankaa ee sidoo kale haysata kumanaanka dadka barokacayaasha ah ee ka soo cararey rabshadda iyo abaarta ka jirta qaybaha kale
ee dalka. MSF waa hay’adda ugu weyn ee adeegyo daryeel caafimaad oo degdeg ah ku bixisa boqollaal kiilomitir oo ku hareereysan Gaalkacyo.
MSF waxaa ay si joogto ah uga shaqeyneysey Soomaaliya tan iyo 1991gii waxaana ay hadda daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixisaa siddeed gobol. In ka badan 1,400 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan ku dhowaad 100 shaqaale oo Nayroobi jooga, ayaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, qalliin, daaweynta nafaqo-xumada, iyo sidoo kale taageero la siiyo dadka soo barokacay taas oo ah daryeel caafimaad, biyo la siiyo iyo agabka caafimaadka oo loo qaybiyo oo lacag la’aan ah ku bixisaa sagaal goobood oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaalla. MSF waxaa ay sidoo kale daryeel caafimaad ay siineysaa qaxootiga Soomaalida ah
ee jooga Kenya (Xerooyinka Dhagaxley iyo Ifo) iyo Itoobiya (Liben).
Tags: MSF, Norh Galcayo, South Galcayo, Victims of Violence, violence